सपनामैै सीमित मन्त्रीका भाषण, काठमाडौँकै सडकमा ज्यान लिने खाडल (भिडियोसहित) - TV Annapurna
विनोद देवकोटा/टिभी अन्नपूर्ण, काठमाडौँ ।
उसो त नेपालमा राजनीतिज्ञ र सरकारका मन्त्रीले बोलेका कुरामा सर्व साधारणले चासो र विश्वास लिन छोडी सकेका छन् । निर्वाचनका बेला वर्षैदेखि नेताहरूले विभिन्न सपना बाँड्दै आएका छन्। उनीहरूले देखाएका र बोलेका अधिकांश कुरा सपनामै सीमित भएका छन् ।
सपनामै सिमित मन्त्रीका भाषण
गत वर्षको चैत ११ गते चितवनमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले ‘वैशाख १५ गतेपछि देशका कुनै पनि सडकमा खाल्डा नहुने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, “सडकमा खाल्डा देखिए मलाई फोन गर्नुस्, तत्काल मर्मत हुनेछ” । उनले मुग्लिन–नारायणगढ सडक अवलोकनको क्रममा चितवन पुगेर यस्तो बताएका थिए ।
मन्त्री महासेठले सायद चर्चामा आउन गरेको यस्तो हावादरी प्रतिबद्धतालाई अहिले देशैभरीका सडकमा भएका खाल्डालेमात्रै होइन, उनले दैनिक ओहोर दोहोर गर्ने काठमाडौँकै सडकका खाल्डाले पनि जिस्क्याइरहेका छन् ।
उनको कुरा सुन्ने बित्तिकै पनि धेरैले आलोचना गरेका थिए, भने कतिपयले झिनो आशा पनि राखेका थिए । तर अहिले आएर एउटा कुरा प्रमाणित नै भएको छ, चुनावमा आश्वासन बाँड्न र चर्चामा आउन जे पनि भन्न भ्याउने नेता र मन्त्री महासेठको देशभरिका सडकको अवस्था हेर्दा सिन्को पनि नभाचेको भन्न सकिन्छ ।
राजधानीकै सडकमा ज्यानमारा खाल्डा
देशकै राजधानी काठमाडौँको मुख्य सडक चक्रपथका विभिन्न ठाउँमा दर्जनौँ ज्यानलिने खालका खाल्डाहरू छन् । कतिपय ठाउँमा भने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको आवत–जावतको बेला रातारात काम गरेर भए पनि सडक चिल्याउने काम भयो । तर मोदीले काठमाडौँका सबै ठाउँमा पुगेनन् । अझै चक्रपथका गंगबुदेखि सामाखुसी सडकखण्ड, चक्रपथ नारायण गोपालचोक सडक, चावहिल चुच्चेपाटी सडक खण्ड, बालाजु नयाँ बजार सडक लगायत बौद्धको जोरपाटी सडकखण्डमा खाल्डामात्रै होइन सामान्य कालोपत्रे समेत भएको छैन । वर्षा र पानी परेको बेला सडक खण्ड नै हिलाम्य छन् । यतिमात्रै होइन सिंहदरबार वरिपरिका भित्री सडको हालत नै अस्त व्यस्त छ ।
चक्रपय मात्रै होइन चक्रपथ बाहिरका अधिकांश भित्री सडकहरू कच्ची छन्, कालोपत्रे निस्किएका छन्, हिलाम्मे छन्, खालाखुल्डी नभएको प्राय भित्री सडक नै छैनन्, कतिपय सडकमा ज्यान जाने भ्वाङ् छन् । यी सडकले त मन्त्रीलाई जिस्क्याएको मात्रै होइन कुरी कुरी गरिरहेका छ ।
यी सडक छेउका नागरिक भन्छन् ‘खै सरकार कहाँ छ ? मन्त्री के गर्दै छन् ? हामीलाई के थाहाँ ? यता बसिसक्नु छैन, हिँडिसक्नु छैन । तार्केश्वर नगरपालिकाकोे शेषमति सडक खण्डमा बस्ने सङ्गम श्रेष्ठ भन्छन्, “हामीलाई गफ होइन, काम चाहिएको छ, कहिले हुन्छ ? यो सडकको हालत कुन बेला कहाँ लडिन्छ थाहैँ हुँदैन, वर्षामा पानी परेको बेला हिलाम्मे हुन्छ, गाडीकोे टायर डुब्ने हिलो हुन्छ” ।
काठमाडौँका धेरै सडक अहिले हिँडिनसक्ने अवस्थामा छन् । काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले धेरैठाउँमा सडक खनेर छाडेको छ । कतैकतै टालटुलसम्म पारेका सडक पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले खनेर खाल्डैखाल्डा बनाएको छ । कतैकतै पिच गरिएपनि अहिले त्यो पिच पनि भासिएर सडक अग्लो होचो हुन थालेको छ । बाटो बन्दै गरेको ठाउँमा र खाल्डा खुल्डी भएको ठाउँमा खतराको सङ्केतसमेत छैन । यस्तो विजोग हरेक सडकमा देख्न पाइन्छ ।
‘सरकारले किन वास्ता गर्थ्यो र चुनावका बेला आश्वासन दिए, भोट मागे गए अब पाँच वर्ष ढुक्कै होलान्, किन आउँथे र एक स्थानीयले बताए । उनले भने ‘यही बाटो विभिन्न पार्टीका नेता धुलो उडाउँदै हिँड्छन्, तर यो बाटो कहिल्यै बनाएनन् ।’
सडक छेउँमा पसल गर्नेहरुको पीडा नि कम्ती छैन । उनीहरू भन्छन्, “कहिलेकाहि त लाग्छ, यो काठमाडौँको व्यापार छोडेर हिमालतिर पसौँ । चक्रपथको महाराजगन्ज सडकखण्डमा पसल गर्ने रामबीर भट्राई भन्छन्, “पसल बन्द गरौँ खाना बन्द हुने, खोलौँ यो धुलो खानु पर्ने । के गर्नु पीडा छ” ।
सवारी चालकहरूको पीडा पनि कम्ती छैन, उनीहरू भन्छन् सडकमा कहाँनिर खाल्डो छ थाहै हुँदैन, दुर्घटनाको जोखिम पनि अति नै हुन्छ, सङ्केत पनि राखिएका छैनन्, ज्यान जाने खाल्डा छन् सडकमा । राति त झन् गाह्रो हुन्छ, एक जना टेम्पो चालक, नारायण राई भन्छन्, “एकदम जोखिम मोलेर सवारी चलाउनु पर्छ, कहाँनिर के हुन्छ, थाहँै हुँदैन । ठुला सवारी साधनलाई अलि सजिलो होला, हामीलाई त गाह्रो छ” ।
सरकारी निकायबीच समन्वयको खाडल
सडकमा भएका यी खाल्डा खुल्डी कसले बनाउँने भन्नेमा पनि सबैका आआफ्नै धारणा छन् । सडक विभागले सडक डिभिजन त सडक डिभिजनले महानगरलाई देखाउँदै पन्छिन खोज्छन् ।
सडक विभाग योजना शाखा प्रमुख रमेश सिंह भन्छन्, “सडकमा भएका खाल्डा र मर्मत सम्बन्धी सडक डिविजन टेकुले हेर्ने हो” । उता सडक डिभिजन कार्यालय टेकुका इन्जिनियर अशोक रत्न शाक्य भने, काठमाडौँका सबै ठाउँका सडक बनाउँने जिम्मेवार आफ्नो नभएको तर चक्रपथका केही ठाउँका सडक मर्मत गर्ने जिम्मा भए पनि काम धेरै, कर्मचारी कम भएकोले ढिलाइ भएको र मौसमले पनि साथ नदिएकोले ढिलाइ भएको हो, “हाम्रो जिम्मेवारी भएको ठाउँमा भएका खाल्डाखुल्डी र बिग्रेको सडक छिट्टै मर्मत गर्छौ” । महानगरभित्रका धेरै ठाउँमा समस्या छ त्यो त सरकारले वा महानगरले गर्नु पर्ने उनले बताए ।
काठमाडौँ महानगरपालिका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यका अनुसार महानगर भित्रका ८ मिटरभन्दा कम चौडाई भएका सडक निर्माण, मर्मतको जिम्मा महानगरको हो । उनले भने, “हाम्रो जिम्मामा भएका प्राय सबै सडक कालोपत्रे गर्ने र मर्मतको काम सकिएको छ, बाकी ८ मिटरभन्दा ठुला सडक निर्माण, कालोपत्रे, मर्मत लगायतका जिम्मा सडक विभागको हो । नेपाल सरकारको मातहतमा ती कामहरू हुनु पर्ने हो ” ।
सरकारी निकायबिच समन्वय नहुँदा र नेता र मन्त्रीका भाषण चर्चामा आउनमात्रै भएका हुँदा सर्वसाधारणको सास्ती खेप्ने दिन कहिल्यै गएन । त्यसैले अब भाषण होइन जनताले काम र परिणाम चाहेका छन्,मञ्चमा उभिएर चिल्ला र मिठा आश्वासन बाँडेर केही हुनेवाला छैन । जरुरत छ, सबै क्षेत्रसँग समन्वय गरेर जनताले देख्ने र महसुस गर्ने खालको कामको ।
सडकमा खाल्डाखुल्डी देखिए मन्त्रीलाई फोन गर्नुहोस्
चैतपछि काठमाण्डौका सडकमा खाल्डाखुल्डी नभेटिने
कसैसँग पनि मैले भेट गरेको छैन : नम्रता श्रेष्ठ